युरोप सबैभन्दा बाइक मैत्री शहर अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप सबैभन्दा बाइक मैत्री शहर अनि कसरी त्यहाँ प्राप्त गर्न
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
युरोप गरेको केही हेर्न तपाईं लामो यदि गन्तव्यहरू पर्छ-भ्रमण, सबैभन्दा बाइक मैत्री शहर को केही पक्कै आफ्नो सूची बनाउनेछ. यी शहर बाइक द्वारा अन्वेषण गर्न ठूलो हो, तिनीहरूलाई लागि आदर्श बनाउने बजेट मा यात्रा. र तपाईं रेल द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्. यहाँ दस भन्दा बाइक मैत्री युरोप मा शहर हो:
1. बाइक-मैत्री एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
एम्स्टर्डम लगातार युरोप मा सबै भन्दा बाइक मैत्री शहर बीच भएको छ. यो सडक खण्डहरू सट्टा चक्र ट्रयाक विभाजित छ, तपाईं सबैतिर जान अनुमति कार-मुक्त. तपाईं सजिलै गरेर पुग्न सक्दैन पेरिस बाट रेल, ब्रसेल्स, कोपेनहेगन र अन्य प्रमुख युरोपेली गन्तव्यहरू.
2. बाइक-मैत्री कोपेनहेगन, डेनमार्क
कोपेनहेगन निवेश अधिक € 134 मिलियन विकास मा आफ्नो साइकलको नेटवर्क वर्षौंदेखि. त्यो आफ्नो चक्र पथ नेटवर्क प्रभावशाली बनाउन योगदान र greenest बीच हुन कोपेनहेगन शुरू युरोपेली गन्तव्यहरू.
3. बाइक-मैत्री बर्लिन, जर्मनी
बर्लिन एक समय को लागि युरोप मा सबै भन्दा बाइक मैत्री शहर को एक बन्न labored छ. तिनीहरूले अन्तमा यो गरे, यस साइकलको समुदाय को एक विस्तृत अभियान धन्यवाद. युरोपेली रेल यातायात को हब को रूपमा, बर्लिन एकदम छ प्राप्त गर्न सजिलो.
4. युट्रेच्ट, नेदरल्यान्ड्स
को शहर नेदरल्यान्ड्स आफ्नो साइकिल प्रेम. Utrecht यसको साइकलमा धेरै लगानी गर्दछ पूर्वाधार. लामो साइकल सडकमा र विशाल पार्किंग सुविधाहरु सजिलो त्यहाँ बाइक प्रयोग बनाउन.
युट्रेच्ट गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प युट्रेच्ट गाडिहरु गर्न
बर्लिन युट्रेच्ट गाडिहरु गर्न
पेरिस युट्रेच्ट गाडिहरु गर्न
5. आन्ट्वर्प, बेल्जियम
आन्ट्वर्प बेल्जियम सबैभन्दा बाइक मैत्री शहर हो, एक विकास संग नेटवर्क साइकलको बाटो को. ठूलो परियोजनाहरू थप यसलाई सुधार उद्देश्य साथ, आन्ट्वर्प पक्कै युरोप मा शीर्ष साइकलको गन्तव्यहरू बीचमा रहन हुनेछ.
भियना लागू दावा युरोप पहिलो कार्गो बाइक भाडा सिस्टम. शहर उदार भियना बनाउन प्रायोजित अन्य पहल बीच थप बाइक मैत्री चक्र पथ नेटवर्क को 1300-मी निर्माण गरिएको छ.
7. बेसल, स्विट्जरल्याण्ड
बेसल केही कुराहरू लागि ज्ञात, र बाइक मैत्री रहेको तिनीहरूलाई मध्ये एक छ. कुनै पनि मौसम वा सिजन मा, तपाईं सजिलै वरिपरि नेभिगेट गर्न आफ्नो साइकिल प्रयोग बेसल को बासिन्दा देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईं सीधा रेल द्वारा एम्स्टर्डम देखि बेसल पुग्न सक्दैन.
8. Munster, जर्मनी
बीचमा जर्मनीको सबै भन्दा बाइक मैत्री शहर, Munster एक लगातार राम्रो स्तर राख्छ. शहर को cyclists यसको साइकलको पूर्वाधार र सुरक्षा संग खुसी छन् सुनिश्चित गर्न कठिन काम गरिरहेको छ.
एसेन Munster गाडिहरु गर्न
Bielefeld Munster गाडिहरु गर्न
कोलोन Munster गाडिहरु गर्न
हानोवर Munster गाडिहरु गर्न
9. भियना, इटाली
इटालियन शहर सामान्यतया युरोप मा सबै भन्दा बाइक मैत्री शहर बीच छैनन्, तर भियना एकदम राम्रो खडा. यो एउटा ठूलो सहरको अन्वेषण साइकल द्वारा, र देखि रेल सवारी रोम गर्न भियना मात्र को सौन्दर्य होइन्छ आफ्नो यात्रा.
पोर्टो भियना गाडिहरु गर्न
म्यूनिख एक विशाल साइकल नेटवर्क क्षेत्र निर्माण र साइकलको पूर्वाधार सुधार गर्न स्पष्ट योजना छ. अन्तिम लक्ष्य भनेको एकमा पुग्न हो 30% बाइक लागि सर्वसाधारण शेयर. तपाईं प्रयास गर्न बाइक मा म्यूनिख वरिपरि रही चाहनुहुन्छ भने, तपाईं बर्लिन देखि रेल द्वारा त्यहाँ यात्रा सक्छ, भियना, र ज्यूरिख, अन्य शहर बीच.
के तपाईं युरोपको उत्तम गन्तव्यहरूमध्ये तपाईंको साइकल र रेलको प्रयोग गरेर केहि यात्राको लागि तयार हुनुहुन्छ?? एक जीवनकालमा को साहसिक लागि तयार, र तपाईंको रेल टिकट बुक प्रारम्भिक!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Bike-Friendly #बाइक बाइक बाइकफ्रेंडली europetravel रेल यात्रा